Goorma ayuu Alexandre Lacazette dib ugu soo laabanayaa tababarka kooxdiisa Arsenal? – Gool FM
(London) 12 Okt 2019. Alexandre Lacazette ayaa la soo warinayaa inuu diyaar u yahay inuu dib ugu soo laabto todobaadka soo socda tababarka kooxdiisa Arsenal kaddib markii uu ka soo kabsaday dhaawac canqowga ah oo uu la maqnaa.
Lacazette ayaa dhaawacan kaga maqnaa kooxda ka dhisan Waqooyiga Magaalada London todobadii kulan ee ugu dambeeyey tartammada oo dhan.
Si kastaba ha ahaatee, sida ay warinayso Jariiradda Metro, xiddiga xulka qaranka Faransiiska ayaa diyaar u ah inuu sare u qaado soo kabashadiisa si uu taam ugu noqdo oo uu u soo laabto waqtiga loo qabtay ee ah kaddib ciyaaraha caalamiga ah.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in 28-sano jirkaan uu qarka u saaran yahay inuu tababarka kula biiro kooxda inteeda kale ka hor inta uusan mashquul ku noqon kulamada ay ciyaareyso Gunners.
Arsenal ayaan ku soo laaban doonin ciyaarista kulammada illaa 21-ka bishaan October markaasoo ay wajahayaan Sheffield United, iyadoo kulamadeeda xigana ay la kala ciyaari doonaan kooxaha Vitoria de Guimaraes, Crystal Palace iyo Liverpool inta lagu guda jiro dabayaaqada bishaan.
ESPN oo sheegeysa in lagu kala baxay heshiiska uu Mario Mandzukic ku aadayo Man United